Kurwisa COVID-19 muYemen: WHO neKSRelief vanobatana nemauto
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Yemen Kuputsa Nhau » Kurwisa COVID-19 muYemen: WHO neKSRelief vanobatana nemauto
Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau • Yemen Kuputsa Nhau
kurwisa COVID-19 muYemen
COVID-19 ndiyo inokanganisa hutano hweveruzhinji muYemen iyo iri kutamburawo sedambudziko rakaipisisa revanhu. Inoshamisa 80 muzana yevagari vanga vachida rubatsiro rwevanhu gore rakapera. Iine chete hafu yezvivakwa zvehutano inoshanda, iyo hutano system yave padhuze nekudonha.
World Health Organisation (WHO) uye King Salman Humanitarian Aid uye Relief Center (KSRelief) vakabatana mukurwisa COVID-19 muYemen kuburikidza nechirongwa chitsva chekutsigira kugadzirira kwe COVID-19.
Pasi pemubairo mutsva uyu, WHO ichashanda pamwe neHurumende yeHuzhinji Hutano neVanhu kugonesa kukurumidza kuona uye kupindura kumatare eCOVID-19 nemasumbu, kusanganisira kuburikidza neyakaganhurirwa, yakawanda-chikamu chikamu chekubatanidza hurongwa pakati nepakati pehutongi nhanho uye rutsigiro kunzvimbo dzekukurumidzira mashandiro (EOC) mhiri nyika. Makumi maviri nematanhatu makuru ekupinda muYemen achashongedzerwa kuti akwanise kukurumidza kuona COVID-19.
Nekuda kwekudyidzana uku, rutsigiro rwakakomba rucharamba ruchipihwa kuongororwa nekutsigira mapoka eECVID-19 anokurumidza kupindura mumatunhu akakosha. Zvakare, rutsigiro rwakawedzerwa rwuchapihwa kune 1,991 sentinel nzvimbo dzinoshuma kuburikidza neElectronic Integrated Disease Early Warning System (EIDEWS). Iyi sisitimu yekutarisa inounganidza ruzivo nezvehosha-inowanzoitika zvirwere kuti ikurumidze kurwira kwehutano hweveruzhinji kudzikisira hurwere nekufa kuburikidza nekutanga kuona uye nekukurumidza kupindura kuputika kwezvirwere, kusanganisira COVID-19.
Iyo purojekiti yakabatana ichawedzerawo kugona kwekuyedza kwepakati marabhoritari ehutano eruzhinji (CPHL) munyika yese nekutsigira kudzivirira kutapurirana kweECVID-19 mune zvehutano uye zvisiri zvehutano. Rutsigiro rwakasiyana-siyana kuzvivakwa zvehutano zvichavandudza kugona kwavo kugamuchira varwere veCVDVD-19 nekupa zvekurapa & zvishandiso uye kudzidziswa kwekutarisira nyaya kune vashandi vehutano
"Kutenda nemupiro mutsva uyu kubva kuKSRelief, WHO ichakwanisa kupa rutsigiro rwakakwana kumhinduro yenyika yeCovid-19. Izvi zvinoitika panguva yakakodzera sezvo WHO nevashandi vezvehutano vari kugadzirira hutachiona hutsva, ”akadaro Dr. Adham Ismail, Mumiriri weWHO muYemen.
Yakapihwa mari inosvika US $ 13 miriyoni, chirongwa ichi chikamu chechibvumirano chakakura cheUS $ 46 miriyoni pakati pemasangano maviri aya, chakasainwa munaGunyana 2020, icho chaisanganisirawo mamwe mapurojekiti matatu ezvekudya, mvura uye noutsanana nharaunda, uye kuendeswa kwehutano hwakakosha .
KSRelief anga ari iye mukuru wekudyidzana naye weWemen Yemen mu2019--2020. Kubva muna Gumiguru 2019, kudyidzana pakati pemasangano maviri kwakabatsira kuchengetedza hutano hweYemen, kusanganisira kuburikidza nerutsigiro kune vanotambura. Kuenderera mberi kutsigirwa kubva kuKSRelief kwakabvumidza WHO kuti igadzirise kupihwa kwemishonga inoponesa-hupenyu, kusanganisira kurapwa kwevarwere vane chirwere chisingaperi, chinotyisa hupenyu, senge kenza uye itsvo kutadza. Kudyidzana uku kwakatsigirawo hutano hwaamai nemwana, kusanganisira rubatsiro kuvakadzi vane nhumbu kuti vasununguke zvakanaka.
Nezve dambudziko revanhu muYemen
Yemen inoramba iri iyo Dambudziko rakashata revanhu uye kushanda kwakaomesesa kweWHO. Vamwe vanhu zviuru makumi maviri nezvina - makumi matatu nezana kubva muzana - vanoda rubatsiro kana dziviriro muna 24.3
Iyo hutano system yave padhuze nekudonha. Vanopfuura mamirioni 17.9 vanhu (kubva pahuwandu hwevanhu hwemamirioni makumi matatu) vaida rubatsiro rwehutano mu30. Panguva imwecheteyo, hafu chete yezvivakwa zvehutano iri kushanda zvizere kana zvishoma. Izvo zvinoramba zvakavhurika zvinoshaya vanokwanisa vashandi vehutano, mishonga yakakosha nemidziyo yekurapa, senge mamask nemagurovhosi, okisijeni nezvimwe zvinodiwa.
COVID-19 iri pasi pehutano hweYemen 'hutano hweveruzhinji. Kubva muna 26 Ndira 2021, zviremera zvehutano zveYemen zvakamhan'ara 2,122 yakasimbisa nyaya dze COVID-19, iine 616 inoenderana nekufa. Vanoona nezvehutano vari kunetsekana kuti kushumwa zvakanyanya kunoenderera mberi mune dzimwe nzvimbo dzenyika nekuda kwekushaikwa kwenzvimbo dzekuyedza, kunonoka kutsvaga kurapwa, kushorwa, kunetsekana kuwana nzvimbo dzekurapa kana njodzi dzinoonekwa dzekutsvaga rubatsiro. Uyezve, inogona kuratidza hutachiona hukuru hweasymptomatic husati hwaonekwa munyika. Vashandi vehutano vari pasi vanoenderera mberi vachishandira kuwedzera kuongororwa. kuendesa vakazvitsaurira COVID-19 vashandi mukati memasangano; kuongorora hutachiona hwehutachiona pazvirongwa zvehutano zvakakosha; kuchenesa mameseji kukurudzira shanduko yemaitiro; uye kukurudzira nzvimbo yekuchengetedza zvakanyanya (ICU) kugona.
World Tourism inoda rubatsiro, uye Saudi Arabia iri ...
Vanhu veAmerica vakanyevera nezvevose vanoenda kuRussia
United Airlines: Magetsi Ndege Yakagadzirirwa Kutora Ndege ...
Paris 'Yakawanda Iconic Yekushanya Inokwezva Inovhurazve ku ...
Sandals Royal Bahamian: Zvimwe zvitsva zvehunyanzvi ...
Yakakura kuraira munhoroondo: United inowedzera 270 Boeing uye ...
Iyo itsva Tourism Gamba Inobuda kubva kuAlbania
Guta gurusa reAustralia rinoenda mukuzara kwevhiki mbiri ...